भाइरल भिडियो : ललितपुरमा कुटाइ खाने ट्राफिक प्रहरी को हुन्? – Shirish News
भाइरल भिडियो : ललितपुरमा कुटाइ खाने ट्राफिक प्रहरी को हुन्?
काठमाडौं ः कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण प्रशासनले काठमाडौं उपत्यकाका तीनै जिल्लामा भदौ २४ सम्म निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । सभा, समारोह, उत्सव, जात्राजस्ता भीडभाड हुने गतिविधिमा पनि निषेध गरिएको छ ।
यसैबीच ललितपुरमा बुधबार त्यहाँका स्थानीयले रातो मछिन्द्रनाथको जात्रा निकाले । यसपछि प्रहरीले जात्रामा हस्तक्षेप गर्दा जात्रामा सहभागी र प्रहरीबीच झडप भयो। प्रशासनको हस्तक्षेप पछि जात्रा भने रोकिएको छ । सोही झडपका क्रममा भएको एक घटनाको भिडियो अहिले सामाजिक सञ्चालमा भाइरल भइरहेको छ ।
भिडियोमा मोटरसाइलकमा सवार एक ट्राफिक प्रहरीमाथि भीडमा रहेकाहरुले अन्धाधुन्ध आक्रमण गर्छन् । उनी सवार मोटरसाइकल भुइँमा ढल्छ । धैरै जनाले लात, मुक्का, ढुंगा, काठमा टुक्रा लगायतले प्रहरीमाथि आक्रमण गरेको भिडियोमा देखिन्छ । भीडकै केहीले उनलाई कुटपिट गर्नेहरुबाट छुटाएर लैजान्छन् तर आक्रोशित केही व्यक्तिले । पछिपछि गएर ट्राफिक प्रहरीमाथि आक्रमण गर्छन । उनलाई सडकपेटीमा लडाएर निरन्तर आक्रमण गरिरहन्छन् ।
को थिए उनी
कुटाइ खाने प्रहरी कमलप्रसाद घिमिरे रहेको महानगरी ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख भीम प्रसाद ढकालले जानकारी दिए । उनी ट्राफिक प्रहरीका जवान हुन्। सो समय उनी ड्युटीमै थिए । ड्य्टीकै क्रममा हिड्दा विनाकारण उनीमाथि आक्रमण भएको हो । उनको हात, खुट्टा, टाउकोमा चोट रहेको र ललितपुरकै अल्का अस्पतालमा उपचाररत रहेको महाशाखा प्रमुख ढकालले जानकारी दिए ।
बाटोमा हिडिरहेका एक्ला प्रहरीमाथि निर्धात कुटपिट गरिएको भिडियो बाहिरिएपछि । धेरैले घटनाप्रति निन्दा गर्दै आक्रमणमा संलग्नमाथि कारबाहीको माग गरेका छन्।